Hogaamiyihii hore ee Panama Manuel Noriega oo geeriyooday isagoo xabsi ku jira - Hablaha Media Network
Hogaamiyihii hore ee Panama Manuel Noriega oo geeriyooday isagoo xabsi ku jira
HMN:- Hogaamiyihii hore ee dalka Panama Manuel Noriega ayaa geeriyooday isagoo 83 sano jir ah kuna jira xabsi sida uu xaqiijiyay Madaxweynaha Panama Juam Carlos Varela.
Manuel Noriega, ayaa madaxweyne ka ahaa dalka Panama intii u dhexeysay 1983-1989 xilligaa oo ay xukunka ka tureen ciidamo Maraykan ah oo qabsaday dalka Panama.
Noriega ayaa miyir la’aa tan iyo bishii March kadib markii qalliin maskaxda loogaga sameeyay waxana uu u dhintey xanuunkaa ka hayay maskaxda.
Hase yeeshee markii uu noqday hogaamiyaha dalka Panama ayuu ka soo horjeestay siyaasadii Maraykanka taasina waxa ay sababtay in aakhirkii ay ciidamada Maraykanka soo farogeliyaan xukunkiisa kana soo qabtaan caasimada dalkiisa,waxana Maxkamad ku taal dalka Maraykanka ay ku xukuntay 17 sano oo xarig ah.
Dowlada Maraykanka ayaa ku eedeysay Noriega oo ahaa hogaamiye awood badan inuu caawinayay ururada ka ganacsada daroogada iyo in uu weliba ku kacay falal qaarijin ah.
Xukunka markii uu soo dhamaystay sanadkii 2007-dii ayay dowlada Maraykanka ku wareejisay wadanka Faransiiska halkaa oo maxkamad ku taal magaalada Paris ay ku xukuntay 7 sano oo xarig ah.
Balse dowlada Panama ayaa markale ku xukuntay 40 sano oo xarig ah Noriega iyadoo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo qorsheyn dilal siyaasadaysan.